२०२० का लागि डीभीको आवेदन आज रातिबाट खुल्दै, बिना शुल्क यसरी भर्नुहाेस् आवेदन… – पुरा पढ्नुहोस्……
२०२० का लागि डीभीको आवेदन आज रातिबाट खुल्दै, बिना शुल्क यसरी भर्नुहाेस् आवेदन…
काठमाडौं। अमेरिकी डाइभर्सिटी भिसा (डीभी) का लागि आजदेखि आवेदन खुला हुने भएको छ । नेपालस्थित अमेरिकी राजदूतावासका अनुसार २०२० का लागि आज राति ९ः४५ बजेबाट शुरू हुने डीभीको आवेदन कात्तिक २० गते राति १०ः४५ बजेसम्म खुला रहनेछ ।
दूतावासले डीभी भर्न कुनै शुल्क नलाग्ने पनि प्रष्ट पारेकाे छ। अावेदन भर्न चाहनुहुनेहरूले www.dvlottery.state.gov मा गएर तोकिएको अवधिमा आवेदन भर्न सकिन्छ।
आवेदन दर्ता गर्दा श्रीमान-श्रीमती र आवेदनको समयमा २१ वर्ष नपुगेका सबै अविवाहित सन्तानलाई सुचीकृत गर्न अनिवार्य गरिएको छ । यदि अावेदनमा उनीहरुलाई समावेश नगरिएको खण्डमा आवेदन अमान्य ठहरिनेछ । दूतावासका अनुसार, मुख्य आवेदकले अयोग्य श्रीमान-श्रीमती वा सन्तानको विवरण समावेश गरी आवेदन दिएमा त्याे पनि अयाेग्य ठहरिने छ ।
एकभन्दा बढी आवेदन बुझाएकाे खण्डमा चिट्ठाका लागि अयोग्य ठहरिनेछ र अघिल्लो वर्षको डीभी आवेदनमा प्रयोग गरिएको फोटो यस वर्षको आवेदनमा प्रयोग गर्न मिल्ने छैन् । फाेटाेहरू सही व्यक्तिहरूसँग मेल खाने गरी पेश गर्नुपर्नेछ ।
२०२० का लागि डीभीमा छनोट भए-नभएको ७ मे २०१९ पछि हेर्न सकिनेछ ।
Prevपुर्बेली इकुको मेरी बास्सैमा यस्तो रमाइलो अभिनय हेर्नुहोस ( भिडियो सहित)
Nextसचेत रहौ। मधुमेह अर्थात चिनी रोग लागेको कसरी थाहा पाउने ? रोग लागेपछी के गर्ने ? रोग लाग्न नदिन यसो गर्नुहोस (भिडियो सहित)
हेर्नुहोस् सिमा बिʼबाद चर्किरहेकाे बेला डा. महाबिर पुनकाे गज्जबको आईʼडिया – जसले हुनसक्छ भारतकाे सपना चकनाचुर
मनिषा कोइरालाको सम’र्थन गर्दै नेपाली पत्रकार युवतीले हिन्दीमै दी’इन् भारतीय मिडियालाई खरो प्रतिक्रिया (भिडि’यो सहित)
यसकारण बिग्रिन्छन् तपाइको श्रीमतीहरु समयमै सचेत हुनुहोस् ! (भिडियो सहित) एकपल्ट हेर्नुहोला
हेर्नुहोस्… यस्तो छ आजको सुनको मुल्य…